amụma nzuzo | WikiWon
Anyị kwesịrị ozi a dị ka ọtụtụ weebụsaịtị kwesịrị mma nzube. Anyị log nwere ike iso ndị na-esonụ;
Ụbọchị na Time Stamp
ụzọ ọpụpụ Pages
Number nke Clicks
Kuki na mgbama weebụ:
Mgbe ụfọdụ, mgbe ọ dị mkpa, anyị na-eji kuki iji chekwaa ihe ọmụma banyere anyị esenowo si mmasị na esenowo akụkọ ihe mere eme na-enye mma ọrụ anyị ọbịa.
Ọ bụla mgbasa ozi na-eje ozi site Google, Inc., na mmekọ ụlọ ọrụ nwere ike na-achịkwa site na iji kuki. Kuki ndị a ekwe Google iji gosipụta mgbasa ozi dabeere na gị nleta a na saịtị na ndị ọzọ na saịtị na-eji Google mgbasa ọrụ. Ịmụta otú pụọ na Google si kuki ojiji. Dị ka e kwuru n'elu, ọ bụla nsuso mere site Google site kuki na ndị ọzọ usoro bụ isiokwu Google onwe nzuzo atumatu.
Gịnị bụ DoubleClick DART kuki? The DoubleClick DART kuki na-eji Google na mgbasa ozi na-eje ozi na nkwusa weebụsaịtị egosipụta Adsense maka ọdịnaya na mgbasa ozi. Mgbe ọrụ ileta otu Adsense nkwusa na website ma ma na-ele ma ọ bụ pịa ihe ad, a kuki nwere ike ama esịn na na ọgwụgwụ ọrụ nchọgharị. The data achikọputaworo kuki ndị a ga-eji na-enyere Adsense nkwusa mma na-eje ozi ma jikwaa mgbasa ozi na ha na saịtị(s) na gafee web. Ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke DART kuki site na ịga na Google ad na ọdịnaya netwọk iwu nzuzo.
Ndenye aha na zite:
Ị Mkpa na-eso anyị nzuzo atumatu:
Ime bụghị adịgboroja
Ọ bụrụ na ọ bụla ngwá ọrụ a na-adịghị arụ ọrụ ahụ, biko kpọtụrụ m na-agwa m ka m nsogbu gị nke ụdị i aka.
Ọ bụrụ na ọ bụla njikọ na-agbajikwa,naghị arụ ọrụ kpọtụrụ m na m ga-eme na nke ziri ezi na 24 awa
Ọ bụrụ na ọ bụla download njikọ na-adịghị na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na biko nsogbu ọ bụla show na m website kpọtụrụ m m ga-eme ya
Ọ bụrụ na ị mkpa ọ bụla ọzọ na ngwá ọrụ,plugins,themes,ọzọ isiokwu kpọtụrụ m m ga tinye ngwá ọrụ, na niile chọrọ na 24 awa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume nanị gị ozi m.
Ị nwere ike ịkpọtụrụ m site na m page. kpọtụrụ Me